यो पुरानो नोटको मुल्य अहिले १० लाख भन्दा पनि बढी छ ! सेयर गरौँ भएकाले अनलाईमा बेचौं ! – mero sathi tv
यो पुरानो नोटको मुल्य अहिले १० लाख भन्दा पनि बढी छ ! सेयर गरौँ भएकाले अनलाईमा बेचौं !
On २९ कार्तिक २०७४, बुधबार १०:२३
eBay को एउटा खाता खोल्नुहोस: त्यसको लागि यहाँ क्लिक गर्नुहोस
आफु संग बएको पुरानो नोटको एउटा ठुलो साइजमा क्लियर फोटो खिच्नुहोस् !
नोटको विविरण, सिरियल नम्बर, कुन जमाना छापिएको हो सबै उल्लेख गर्नुहोस !
तपाईले खिचेको नोटको सफा फोटो लाइ ebay को वेबसाइटमा अपलोड गर्नु होस् !
eBay को वेबसाइटमा नक्कली नोट अपलोड गर्न पाइदैन त्यसैले गलत धन्दा गर्छु भने जे पायो त्यहि अपलोड नगर्नु होला ! eBayको नियम अनुसार नक्कली सामग्री बेच्न पाइदैन त्यसैले सत्य र सहि मात्र बिक्रि गर्नु होला !
eBay एउटा माध्यम हो डिल व्यक्तिगत तरिकाले पनि गर्न सकिन्छ !
यदि तपाई संग धेरै पुराना नोट हरु छन् भने इन्टरनेटमा बेच्न सुरु गरिदिनुस, तपाई संग भएको नोटको जुन मार्केट भ्यालु छ त्यो भन्दा १० गुना धेरै पैसा नोट बेचेर कमाउन सक्नु हुन्छ तपाई ! प्राय जसो चिनिया, इन्डियन, अमेरिकी लगाएत विश्वका विभिन्न देश बाट नोट खरिद गर्छन मान्छे हरु !
इराकमा लक्ष्मीको मृत्यु – हार्दिक श्रद्धान्जली
लोकसेवा आयोगमा क- कसको निस्कियो अन्तर्वार्तामा नाम ? (नामावलीसहित)